Siyaasiyiin si weyn uga fal-celiyey guusha Dubbe uu ka gaaray dagaalkii Villa Somalia - Caasimada Online
Home Warar Siyaasiyiin si weyn uga fal-celiyey guusha Dubbe uu ka gaaray dagaalkii Villa...
Siyaasiyiin si weyn uga fal-celiyey guusha Dubbe uu ka gaaray dagaalkii Villa Somalia
Muqdisho (Caasimada Online) –Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dubbe ayaa ku guuleystay kursigii uu maanta u tartamay ee doorashadii Aqalka Sare, saacado kadib markii lagu soo qaaday dagaal xoog leh oo kaga yimid dhanka Villa Somalia.
Wasiir Dubbe ayaa ka adkaaday musharaxii Villa Somalia ay wadatay oo ahaa Cabdikariin Maxamed Xasan oo helay 17-cod, halka Cusmaan Dubbe uu ku soo baxay 28-cod.
Guusha uu gaaray Wasiir Dubbe ayaa waxaa si weyn usoo dhaweeyey inta badan musharixiinta u taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya, ayaga oo ku faraxsan guul-darrada Villa Somalia.
Halkan hoose ka akhriso falcelinta siyaasiyiinta.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa yiri, “Hambalyo mudane Cismaan Obokor Dubbe oo kamid noqday xubnahay Aqalka Sare ee maanta la doortay. Waxaan Eebbe uga rajeynayaa in uu u fududeeyo mas’uuliyadda loo doortay.”
Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa isna yiri, “Hambalyo sanetor Cismaan Obokar Dubbe oo loo doortay xubinimada kursiga Aqalka Sare ee reer Somaliland. Doorashada Somaliland ee maanta waxay si cad u muujineysaa guuldarida ku soo wajahan nidaamka Farmaajo. Hambalyo reer Somaliland waad u hiiliseen demoqraadiyadda iyo dowladnimada Soomaaliya.”
Cabdiraxmaan Cabdishakur Warsame ayaa qoraal uu soo saaray ku yiri, “Waxaan hambalyo u dirayaa Prof. Cusmaan Obokar Dube oo loo doortay Aqalka Sare ee Baarlamaanka 11-aad. Dube wuxuu tilmaam u yahay guuldarida kooxda N&N, maadaama uu ka mid ahaa shakhsiyaadkii isdabaqabtay xilligii danbe, qaybna ka noqday dib u heshiisiinta reer Somaliland.”
Axmed Macallin Fiqi ayaa yiri, “Hambalyo senatarada gobolada Somaliland ku mateli doona golaha aqalka sare ee BFS. Allaha idinla garab-galo gudashada waajibka adag ee idin hor yaalla. Si gaar ah waxaan ugu hambalyaynayaa saaxiibkay wasiir Dubbe oo N&N la’aanteed kursigiisa soo qaatay astaanna u noqon doona inta aaminsan in la heli karo kursi ayadoon N&N aysan ku wadan. Aqalka sare sanadkan gobolada waqooyi dad miisaan culus leh ayaa u soo galaya sida muuqata.”
Mahad Salaad ayaa isna yiri, “Hambalyo Senator Cusmaan Obokar Dubbe oo loo doortay in uu ka mid noqdo Senetarada Aqalka Sare BFS. Hoolka Afisyoone duqii Farmaajo ahaa maanta labo guuldaro ayaa looga soo xambaariyay: doorashadii Senetarada oo dhamaan dadkii uu watay looga soo adkaaday iyo maalintii Arbacada ee faalshowgu u curraafeyn jiray oo sixirfurkeedii la soo helay! Arbaco dambe iyo doorasho hoolka Afisyoone lagu qabanayo hada kadib duqa Farmaajo ah in lagu kari waayo ayaan u malaynayaa!”